Oxygen butane etanoic acid biyaha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 5O2 + 2C4H10 → 4CH3COOH + 2H2O
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kaga falceliso C4H10 (butane)?
Heerkulka: heerkulka Xalka: Mn2 +
C4H10 waxaa lagu qafiifiyey oksijiin hawada ku jirta
Dhacdada ka dib O2 (oxygen) waxay la falgashaa C4H10 (butane)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 5O2 + 2C4H10 → 4CH3COOH + 2H2O
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOH (butane)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOH (ethanoic acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (butane)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
koloriin koloriin etanoic acid chloride sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl
Waa maxay xaalada falcelinta ee CH3COONa () ay kaga falceliso HCl (hydrogen chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COOH (ethanoic acid) iyo NaCl (sodium chloride)?
CH3COONa waxay la falgashay HCl
Dhacdada ka dib CH3COONa () waxay la falgashaa HCl (hydrogen chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOH (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOH (ethanoic acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee NaCl (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) badeecad ahaan?
(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + Kiis4
canxi acetat acid sulfuric etanoic acid macdanta kaalshiyamka
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + Kiis4
Waa maxay xaalada falcelinta (CH3COO) 2Ca (canxi acetat) waxay kula falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CH3COOH (ethanoic acid) iyo CaSO4 (calcium sulfate)?
Dhacdada ka dib (CH3COO) 2Ca (canxi acetat) waxay la falgashaa H2SO4 (sulfuric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada (CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + Kiis4
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta (CH3COO)2Ca (canxi acetat)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee (CH3COO)2Ca (canxi acetat)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh (CH3COO)2Ca (canxi acetat) falcelin ahaan?